Saarland University - Tacliinta Sare Abroad in Europe, Germany
aasaasay : 1948
Ardayda (qiyaastii.) : 18000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Saarland
Qor at University Saarland
University Saarland waa jaamacad casri ah gudahood gobolka Saar-La--Lux - qayb firfircoon ee Europe uu qayaxayo xuduudihii la wadaago u dhexeeya Germany, France iyo Luxembourg. aragti caalami ah ayaa feature a qeexidda of University Saarland abid tan iyo intii la aasaasay in la kaashanaya France ee 1948. maanta, 18.500 dhallinyaradu waxbarasho ee Saarbrücken iyo Homburg (doonoo daawo), 17 boqolkiiba yihiin ardayda caalamiga ah. Waxay ku taallaa goob wanaagsan oo kaynta, campus jaamacadda ardayda iyo cilmi bixisaa kala duwan ee Isboortiga iyo dhaqanka hawlaha, oo ay weheliyaan qaxwada iyo maqaayado badan oo ka dhigi campus ku meel fiican in aad isku dejiso dhexeeya muxaadarooyin ama ka dib shaqo. Iyo in ay tareenka-xawaaraha sare ee ICE ku mahad link waxa ay qaadataa laba saacadood oo kaliya in ay u safraan ka Saarbrücken in Paris.
Ever tan iyo markii la dhisay, University Saarland ayaa viewed ay goobta ku taal soohdinta Faransiis-German sida mid ka mid ah sifooyinka soocayaa ay. Ardayda awood, tusaale ahaan, dhigatid Europaicum - Shahaado, gaarka ah ee Germany, in muujinaysaa danta gaarka ah iyo khibrad arrimaha Yurub. Ardayda of maaddooyinka oo dhan sidoo kale isticmaali karto qayb ka mid ah barnaamijka shahaadada ay waxbarasho at mid ka mid ah jaamacadaha caalamka si ay u helaan a-degree double. kala duwan ee maadooyinka iyo koorsooyinka la bixiyaa ardayda u saamaxaaya in ay qorsheeyaan waxbarashadooda jaamacadeed ay ku ool ah si ay u daboolaan gaar ah tacliinta iyo xirfadaha looga baahan yahay.
informatics, nanotechnology, biosciences iyo Europe waa nidaamo muhiim ah in ay yihiin qaabaynta profile ee jaamacadda. sumcad The fiican ee Waaxda Aqbaarta waxaa hoosta ka xariiqay in hindisaha tacliin heer sare qaranka iyo mashaariicda cilmi-baarista ee dibadda laga maalgeliyo badan dhammaan beerihii waxbarasho tacliinta xoogga saaraan tayada shaqada tacliimeed lagu fuliyay at University Saarland.
Ardayda waa in ay xuddun u ah dhammaan hawlaha baridda ee jaamacadda. At University Saarland, sidii aannu jaamacadaha caalamka, muhiimadda ugu weyn waxaa ku lifaaqan kormeer shakhsi ahaaneed ee ardayda by xubno ka tirsan shaqaalaha waxbarashada ee jaamacadda ee. Taasi waa isbeddel la taaban karo waxa ardayda caadi ahaan la kulmaan jaamacadda mass-waxbarasho. Oo annaguna waxaannu sidoo kale ay maamulaan barnaamijka la talinta, taas oo la kulmay ardayda, taageero iyo hogaaminta siiyaan ardayda-sanadka ugu horeeya si ay uga caawiyaan yareeyo guurka in jaamacad.
jaamacadda A campus halkaas oo wax walba waa soo dhow dahay waxay fududeysaa in ardaydu sii joogteeyaan xidhiidhka kasta oo kale oo shaqaalaha tacliinta. Waxbarashada la saaxiibo in jawi soo dhawayn leh oo bixiya adeegyo aad u fiican ardayda yihiin dhinacyada kale ee wanaagsan ee waxbarashada University Saarland.
Sharciga iyo Dhaqaalaha
Medicine – Medicine af iyo qoraal biosciences
Medicine – Daawo Clinical
Humanities aan (Taariikhda iyo Ilbaxnimo Studies)
Humanities II (Languages, Suugaanta iyo Studies Cultural)
Humanities III (Bulshada iyo Applied Human Sciences)
Sciences Dabiiciga ah iyo Technology aan (Xisaabta iyo Sayniska Kombiyuutarka)
Sciences Dabiiciga ah iyo Technology II (Physics iyo Mechatronics Engineering)
Sciences Dabiiciga ah iyo Technology III
Saarland University, marka hore in la aasaasay ka dib dagaalkii labaad ee dunida, waxaa la aasaasay bishii November 1948 oo taageero ka Dowladda Faransiiska oo hoos timaada oo ka mid ah Jaamacadda Nancy.
Isla mar Saarland laftiisa laga helay xaaladda gaarka ah ee in ay qayb ahaan maamulka iyo ku xiran France by urur dhaqaale iyo lacageed. Iyada oo ay isku dhafan oo ka mid ah caadooyinka waxbarasho Jarmal iyo Faransiis iyo luqado dual of edbinta, Jaamacada lahaa xaq aragti Yurub laga bilaabo. Ka hor inta aan aasaaskii jaamacadda, koorsooyinka tababarka caafimaad oo loogu tala galay ardayda caafimaadka ee cusbitaalka gobolka ee Homburg, Saarland, ayaa lagu soo bandhigay in January 1946 iyo “University Center of Studies of Higher Hombourg” aasaasay oo ku saabsan 8 Laga yaabaa 1947 hoos bacdi ee theUniversity ee Nancy. Ardayda edbiyo qaarkood ka heli kartaa shahaadada degree labada jaamacadaha.
Madaxweynaha koowaad ee jaamacadda madax banaan ee 1948 ahaa Jean Barriol. Isla sanadkaas jaamacadda soo bandhigay kooxihii ugu horeysay ee sharciga, falsafada iyo luqadaha.
In 1950 University Saarland biiray Association of West-German Jaamacadaha iyo aqbalay cusub a, Qaab dhismeedka ururka more dhexe. Europa-Institut waxay u dhisan sida siyaasadda Yurub iyo haanta sharciga tahay.
In 1990 kuliyadda of technology xoogaystaa. Jaamacadda tartiib Balaadhisay xaaladda cilmi-hoggaamineed ee tiknoolajiyadda macluumaadka.
Ma rabtaa wada hadlaan University Saarland ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Saarland on Map
Photos: Saarland University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Saarland
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Saarland.